I-05 / 12 / 2019 | RayHaber | raillynews
Usuku: Ngomhla we-5 kuDisemba ngo-2019
Umsebenzi wokwakhiwa kwesiKhululo seSikhululo seSikhululo saseSiirt ngenxa yokuNikezelwa kweThanda Jikelele yoLawulo lweeNqwelo moya zeeNqwelo moya (i-TCDD) I2019 / 575301 GCC yexabiso le22.205.909,39 TL kunye neendleko ezilinganayo ze29.591.926,00 TL [More ...]
UMphathiswa uTurhan, uMlawuli Jikelele weendlela eziphezulu (i-KGM) kulo nyaka ngenxa yokugunyaziswa koomatshini bokulwa ikhephu kunye noomatshini bokugcina iindlela, utshilo kumsitho. indawo izithuthi Turkey kaThixo "babuye umva kweevili ezijikelezayo, imoto sidlule" ngokuqhubeka indlela indlela [More ...]
I-TCDD 3. Ngokwesiko elilungiselelwe liCandelo loMlawuli, iqela le-20 lithathe inxaxheba kwaye lidlala njengomdlalo opheleleyo webhola ekhatywayo ye-52 kwi-21.11.2019 kunye ne-02.12.2019 kwi-İZBAN kunye ne-TCDD Liman Spor [More ...]
Iibhasi zesiXeko saseSakarya zifunyenwe kwisibulala-ntsholongwane; UMasipala oMbaxa weSakarya uyaqhubeka nococeko lwezithuthi zikawonkewonke. Kwingxelo eyenziwe liCandelo lezoThutho loLuntu, [More ...]
I-Era eNtsha kwiSakarya Kart54 Kiosks
Inqaku elitsha laziswa kwii-kiosks zeKart54. Ngale nqaku intsha, iKhadi elipheleleyo linokuthengwa kwiindawo zokugcwalisa. Umahluko we10 wesixeko liSebe lezoThutho kaMasipala oMbhaxa weSakarya [More ...]
IYunivesithi yaseKaramanoğlu Mehmetbey iya kuqesha abasebenzi bezemfundo; I-Karamanoğlu Mehmetbey University Rectorate kula macandelo alandelayo, i-2547 ibala umthetho wemfundo ePhakamileyo kunye nokuqeshwa kwamalungu e-faculty ngokuhambelana namanqaku afanelekileyo oMmiselo. [More ...]
IBarsa Courthouse Junction Icinezelwe
Iqhosha licinezelwe iBurb Cour Course yegumbi lokuhlangana; Inkundla entsha, iZiko lezeNzululwazi nobuChwepheshe, iZiko leMiboniso, iSebe eliSebenzayo lamaPolisa kunye neGökmen Space kunye neZiko leAviation ephantsi kolwakhiwo. [More ...]
Xa Subway Projects Imeko e Turkey
Emva kwendlela ephantsi komhlaba ye-Istanbul, eyathi yaziswa kwi-ajenda kunye nengxaki yemithombo yemithombo kunye neengozi, amehlo ajikwa kwiiprojekthi zemetro eqhubekayo kulo lonke ilizwe. Umasipala we CHP Mersin ukhangela iimali mboleko zemetro eBursa kunye ne-Kocaeli metro [More ...]
USodolophu uAltay wenze intetho malunga neKonya Metro nolunye utyalomali
Usodolophu womasipala waseKonya Metropolitan e-Ugur u-Ibrahim Altay, udibene namalungu eendaba e-Konya enza uvavanyo lwe-ajenda. Uğur İbrahim Altay, USodolophu wase-Konya Metropolitan, kunye nabameli bemibutho yeendaba yekhaya nakwilizwe. [More ...]
Ngaphakathi kwesitishi saseHaydarpaşa soLuhambo lokuQala; Kwi-2010, umsebenzi wokubuyiselwa kwesikhululo sikaloliwe saseHaydarpaşa, esasinomlilo ophahleni saza sonakala, sigqitywe ngomkhamo omkhulu. I-TRT okokuqala ngqa imeko yasesitishi [More ...]
Akukho nyathelo libuyela kwiProjekthi yeCable yeKartepe
U-Mustafa Kocaman, usodolophu kaMasipala wase Kartepe, udibene nomphathi omkhulu we-32 kwiholo lendibano yomasipala. USodolophu Kocaman T Iprojekthi ye-ropeway ecwangciswe ukuba yakhiwe eDerbent yiprojekthi esele ikhathalelwe kwaye iphoswe iminyaka emininzi. [More ...]
Ishedyuli yeNtlawulo yeeNtengo zeMoto yeBursa Uludağ Iindleko zeXesha lokuPaka imoto kwi2019
I-Bursa Uludağ I-Cable Car Fee Ishedyuli yokuSebenza yeeYure kunye neMirhumo yokuPaka imoto kwi2019; Ski wayiphakamisa Bursa, umgca Turkey lokuqala imoto intambo. I-29 Okthobha yavula kwi-1963. Enye yeempawu zedolophu yaseBursa [More ...]
Great Amathuba E-Bike Bicycle Industry e Turkey
Turkey ubuso ithuba elikhulu kushishino ibhayisekile le: e-wokuhamba. Ibango le-e-bhayikhi, ekwabizwa ngokuba "yibhayisekile yombane yentsimbi enikwe amandla emhlabeni, iyakhula ngokukhawuleza. Turkey kutheni e-Bikes kwi kubathengisi eziphambili amazwe aseYurophu [More ...]
Ukuqwalaselwa kwabaqhubi ..! I-Anatolian Motorway 5-20 izakuvalwa ngoDisemba
Ukuqwalaselwa kwabaqhubi ..! I-Anatolian Motorway 5-20 iya kuvalwa ngoDisemba; Izmit East Junction-Adapazari Junction icandelo le Anatolian Motorway kwicala le-Ankara, ngenxa yokulungiswa kwesakhiwo kunye nomsebenzi wokuhlaziywa kwe5-20 ngoDisemba 08.00-18.00 [More ...]